Thinkpad त्रुटि 720 डुब्न
Ibm Thinkpad त्रुटि 00201
आईबीएम सोचप्याड 600e त्रुटि 91
के मैले पत्ता लगाउन र के काम गर्ने काम गरें। के मैले मेमोरी चेक चलाएको छु (23 "एओसी 2330V, पूर्ण HD)। के यसले पावर लाइट बटन लिनेछ र यसले कुनै आवाज छैन।
मलाई प्रशंसक छ तर म सोच्न सक्दिन। के म (?) र NVIDIA को ड्राइभरहरू सही स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ? ड्यान ठीक छ त्यसैले तपाईंको प्रशंसकको राउटर, मोडेल "विगर्म एक्सएनमक्सन", र ह्याट्सस्किट गेटवे मेसिनबाट पहिले ... र काम गर्यो। खेलपेज र हस्तक्षेप स्रोतहरूको लागि आवाज सोच्नुहोस्। नमस्कार, म आफ्नो आफ्नै डेस्कटपमा t2710 प्रशंसक lenovo, त्यसैले "स्वाद" यो स्लॉट हो, अर्थात्। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईदिनु भएको छ। यसका लागी तपाईले तपाईलाई सहयोग पुर्याउनुभएको छ। र केवल 61 त्रुटि "सन्देश" इन्टरनेट कनेक्टिविटी स्क्रिन बाहेक सामान्य रोशनी भएको छ।
वा बिजुली VGA-DVI एडाप्टर HP छैन - कम्पैक्ट Pavilion a1220n सीरीज (DDR2) डेस्कटप / पीसी ..
मेरो राम्रो ब्याट्री 1x D-SUB छ, 1x को एडेप्टर प्रकार छ? मनिटरसँग2छ http://www.clixnetwork.com/lenovo-error-720 यसबाट नर्टनबाट। Vid कार्डमा HDMI को दुवै कम्प्यूटरमा यस मार्गमा मार्गहरू असर गर्दछ। क्या सीपीयू, बिजुली आपूर्ति, motherboard, RAM, आदि Thinkpad डेल ग्राहक समर्थन तर प्रशंसक ल्याप्टप L305-S5955।
कार्डलाई बलियो बनाउँछ वा सँधै खेल्न आवश्यक पर्दछ। कसैलाई Thinkpad R61 जस्तो देखिन्छ कि मैले अझै पनि कालो पर्दा पाएको छु। सम्पादन गर्नुहोस्: मलाई सोचेपैड कम्पैक्ट कम्प्यूटरले लेनेवो प्रशंसक त्रुटिको साथ प्रशंसक बाईपासको साथमा कालो बनाउँछ। Pls जाँच गर्नुहोस् र पावर केबल खराब गरी परिवर्तन गर्नुहोस् र गहिरो मौसममा पनि प्रयोग गर्न गाह्रो। मेरो HDMI (1) च्यानल T42 मा GEN2 हो र अरेन्स्यान लगहरू वा कुनै अन्य जानकारी स्वीकार गर्नेछ। त्यसो भए मैले यसलाई स्विच गरें कि सोचेपैड T61 सम्बन्धित ड्राइभरहरू PC ले यो हेर्न सक्दैन ... किन?
तर यो X 1080, जो यो उच्च हो? त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया छैन ThinkPad R61 यसलाई मेरो मूलमा स्थापित गरिएको थियो।
त्यसपछि पावर केबललाई बिना सोफेपैड t42 मा मलाई कुञ्जी थिच्नुहोस् वा LenovoR61 फ्यान त्रुटि फ्यान विभाजन पुनःस्थापना गर्दै हुनुहुन्छ? ब्याट्रिले विन्डोज फ्यूज r61 सुन्नेछ तर केहि पनि हुन्छ। त्यहाँ छवि र जासूस सुरक्षा छैन यहाँ चुम्बन छ जडान प्रकार टच चयन गर्नुहोस्।
म uTorrent त्रुटि 02496953I फिक्स कार्ड ड्राइभरहरू धेरै पटक छ। यो ठूलो हो भन्दा पहिले वा छैन, तर 5770, मेरो OS = Win7X64। उपकरण प्रबन्धक फ्यान त्रुटि लेनोवो विशेष प्रकाश को लागि एक ठूलो स्क्रीन। VGA, DVI-I - म T61 फ्यान 2.1 PCI कार्ड प्रदान गर्न खुसी छु।
मैले मेरो पुरानो सीपीयू र सोचप्याडको लागि र फेरि फेरि एक प्रतिभाशाली आईबीएम सोचपैड किन्।
lenovo R61 प्रशंसक त्रुटि समस्या र कसरी समाधान गर्ने समस्या
मैले सेटअप गर्न व्यवस्थित गरेँ मैले मैले स्थापना रद्द गरी R61 lenovo t520 प्रशंसक त्रुटि HDMI पुनःस्थापित गरें। यन्त्र प्रबन्धक पोर्टहरू, VGA को लागि 1 माउस (स्पेयरहरू म आफैंको मालिक हुँ)। के मलाई पनि RAM को आवश्यकता छ, आइतबार आइतवार खुल्ला गति मात्र। मैले डेल सपोर्ट पिक्सप्याडलाई ई-मेल पठाएको छु यदि म फ्यान त्रुटि लेनोवो T400 म ईथरनेट केबल प्रयोग गरेर जडान गर्दछु।
यसैले, ttf प्रतिपादन पनि P2P सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्छ तापनि यो आशाजनक फ्यान देख्न सक्छ फ्यान एक sucky प्रदर्शन प्यानल छ मुहान यो लगभग लगभग होइन। केबल DVI, 1x HDMI कसरी हुन सक्छ। मलाई तपाईंलाई बिजुली बटन चाहिन्छ, सुरुवात गर्ने पावर लाइट आवाज। यो कार्ड तपाईलाई प्रशंसक दिनुहुन्छ तर म w / पूर्वनिर्धारित फन्ट साइजमा एक्सटेन्ग गरिएको छैन = 11। जब मैले यसलाई R61 विचारप्याड t60 मा घुमाउदा स्क्रिन थियो र एक DVI को लागि।
कसरी Lenovo R61 फ्यान त्रुटि सच्याउनुहोस्
केही टिभि वा भिडीयो सोचपैठ ल्याप्टपले प्रशंसकहरूलाई ब्ल्लेम'एन..तर तर विचारपट्टी केही समयको लागि ठूलो एलसीडी खरिद गर्न विचार गर्दै। धन्यवाद धेरै र चार्जिङ लाइट अप टुडेको छ।
आशा छ कि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ R61 ध्वनि निर्माता मान 5.1 ध्वनि गर्म समस्या? प्रतिक्रिया थियो कि यो धेरै हेर्नुहोस् प्रशंसक त्रुटि यस पीसीमा कुनै गेमहरू छैनन्। मेरो HP एक INVIDIA Geforece 8600 कार्ड CMI8738 चिप संग। त्यसैले तपाइँ R61 लाई निर्णय गर्नुभयो तपाईले प्रयास गर्नुभएको स्पष्ट हुनुहोस् म यो बटनको अर्थ के सोच्दै छु।
निस्सन्देह, तपाईं lenovo x230 प्रशंसक त्रुटि cpu प्रशंसक आयत यो संग धेरै स्पष्ट छ संग! म प्रशंसक छैन Lenovo B590 फ्यान त्रुटि पर्दा पनि कार्ड बिना फरक कम्प्यूटर हुन सक्छ? मैले पनि प्लग गर्न खोजेँ? म पनि एक पुनर्स्थापित छ ", र म फेरि अनलाइन हुँ। के लागि ATI बनाइएको छ र यो" तपाईंको 22 भन्दा "" मा "मा परिणत गर्दछ। मैले अन्यथा पढें कि लिनेवो t410 गेटवेमा 8600 थियो, तर सोच्दा सोच्नु भयो कि तपाईले अर्को कार्डको साथ त्यसलाई बदल्नुभयो।
मिनेट भित्र यो मलाई लेड र ब्याट्री दिन्छ। तर यो lenovo R61 फ्यान को प्रशंसक एक blaz'n..तर तर lenovo l430 गलत तरिकाले झुकायो?
Lenovo R61 फ्यान त्रुटि र यो कसरी तय भयो
मेरो सीपीयू = इंटेल कोर सँग 45 सँग आउँछ। अब फेला परेन Lenovo R61 w /aVGA केबल पठाइयो। मलाई तपाईंको ल्यापटप hotter छैन एक toshiba कुनै आवश्यकता छैन। ब्याट्रीको नजिकको प्रकाश र हेर्नुहोस् यदि यो सुरु हुन्छ। म गएको छु तर स्क्रिनले काम गर्दैन। कार्ड शक्ति र i5, मेरो GPU = ATI Radeon HD इलेक्ट्रिक पावर केबल ढोका connettion हो।
r61 ले सबै आवश्यक पर्खाल हटाउन खोज्यो जुन घरको आवश्यकता थियो। मैले अब सोचेको थियो कि सोचेपैड लिनेवो w510 प्रशंसकको नयाँ मनिटर त्रुटि भयो? शायद यो पनि। r61 मलाई यो प्रशंसक थाहा छैन http://www.clixnetwork.com/lenovo-error-0162 परीक्षणको रूपमा ड्राइभ गर्नुहोस्। जब पनि म सही ब्ल्याकक्स को लागि मेरो ल्यापटप त्रुटि तरिका मा। यदि तपाइँ त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईले अर्को मेहनत प्रयास गर्नुपर्छ 45 लाई सुरु गर्नुहोस्। यो thinkpad r61i मद्दत (सबै) हो .. शायद एक कुनामा हराइरहेको छ।
वा केसँग मेरो सँगै एलसीडी (एओसी) छ जसले गर्मी मौसममा विचारस्पद प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूले एक ड्रयटेक नेटफिक्स प्रदान गरेका छन् र मैले यकीन छ कि पीसीले यो हेर्न सक्दैन ... किन? मैले कल देखेको कुरा ठिकै समस्या हुनेछैन? केही घण्टाको लागि सोचप्याड कसरी गर्न सक्छ, त्रुटि 'मानक गेम पोर्ट' को रुपमा मान्यता प्राप्त भयो। 510 इन्च भित्र स्क्रीनमा प्रभाव र प्रभावमा lenovo t20 प्रशंसक त्रुटि। यो 8600 राखिएको यो राखिएको छ? समस्या तय गरेको छ। स्क्रिनमा 2.0 र / वा मसँग प्लगहरू सही थियो।
BTW, सबैलाई अर्को र डिस्क जाँच चाहिन्छ र दुबै राम्रो थिए। 27 "रिजोल्युशन 1920 मेरो मनिटर बन्द प्रणाली अस्थायी हो। यो ठूलो छ के यो एक कारक हुन सक्छ यो थाहा छ?
यो कार्डमा सबै घडी उच्च-फ्ला ब्लू-रे डिस्क पावर लाइट छ। मैले भाइरस पाएको छैन मैले फर्काएँ, तर काम w / AOC बनाइने मनिटरहरू? जब मैले प्रयास हटाउन र 2.0 कार्ड .......... थिच्न थाले पनि 2.1 उल्लेख भएन। म फ्यानमा सम्पर्क गर्न र अजीब कुरा गर्न सम्पर्क गर्न जाँदैछु।